वाह ! ‘सिम्फोनी’ « Drishti News – Nepalese News Portal
वाह ! ‘सिम्फोनी’
१२ भाद्र २०७८, शनिबार 11:17 am
पहाडकी रानी इलामका ‘आम्भु’ विमल वैद्यले २०७५ साल भदौं १९ गते सप्रेम दिनुभयो, मुकाम बसाईको क्रममा सुरुप्प पिउँदै गर्दा ‘अक्षर सिम्फोनी’ ग्रहण गरे । गन्यमान्यवरसँग झुरुप्पै बस्या थिम् । पूर्वको साहित्यको विषयमा कुरा नहुने कुरै भएन । कान थापेर सुनेँ । बैरागी काइलालगायत शीर्ष साहित्यकारको कुरा उप्किएको थियो । ‘आम्भु’ विमलले लेख्नुभएको रचनागर्भको कुरा चाख माने । उहाँको कविता सुनेँ । ओहो क्या ! घतलाग्दो । जीवन भोगाईलाई यथार्थ रुपमा लेख्ने गरेको पृष्ठभूमिसहित वाचन गरे । अलिकबेरसम्म गफिएर आ–आफ्नो रस्ती–वस्तीतर्फ लखरलखर हिड्यौँ ।
पचासको दशकको बेला पत्रकारितामा क्रियाशील थिए । यस मानेमा पनि उनी मेरो अग्रज हो । अहिले साहित्यमा लगाव छ, उनको । २०६० सालमा ‘आकाश छुन खोज्ने मनहरु’ र २०७२ सालमा ‘समय र सपनाहरु’ कृति प्रकाशित छन् । पछिल्लो कृति २०७५ साउनमा ‘अक्षरको सिम्फोनी’ प्रकाशित भयो ।
मञ्जरी पब्लिकेशनद्धारा प्रकाशित कृतिको आवरण फिक्का तर कलात्मक छ । १०८ पृष्ठमा सिम्फोनीको खास गुदी पढ्न पाइन्छ । ती ४३ शीर्षकमा सजिएका छन् ।
फेरिएको इतिहास लेख्ने हातहरु
उही इतिहासको पुनरावृत्ति लेखिरहनेछन्
कहाँ भयो परिवर्तन ?
कसरी आयो क्रान्तिको आवेग
आज खोजिरहेछन्, असारहरु
समानताको सपनाहरु बोकेर क्रान्तिमा होमिएका एउटा योद्धालाई घेरामा राखेर कवि वैद्यले ‘क्रान्तिको परिभाषा’मा भावनाहरु पोखेका छन् । कृतिको शिरानमा पढ्न पाइने कवितामा एउटा योद्धा जो, शोषणको जरा उखालेर अन्यायको विउ मास्ने कुरा गथ्र्यो । आज साउदी अरबमा रंग पोतिरहेको कारुणिक वृतान्तलाई उजागर गरिएको छ । जुन युवाको मनोभावना पनि हो । ‘छुटिरहने साथहरु’मा कसैसँग छुटिएपछिको परिकल्पना उतारेको भेटिन्छ । साथ छुटेदेखि नयाँ साथ पाए बीचको दरारलाई क्षण मानेर कविले ३ पेजमा खर्चिएका छन् ।
साथ भनेको आखिर
पाइला मिलुन्जेलको लागि रहेछ
सँगै हिँडुञ्जेलका लागिरहेछ
जुन दिनदेखि टाढियौं तिमी
मैले पनि त्यहिँ दिनदेखि
नयाँ साथ पाएको छु
तिमीभन्दा अलिक फरकमात्र न हो ।
नयाँ साथ पाएपछि जिन्दगीको मोड नयाँ कथातिर दौडिन्छ । आर्जित खुसीहरुले मायाको आधार शिविरमा सुस्ताउँछ । त्यसपछि सप्रेमको हावाहुरी चलिरहेको बखत खुसीहरुले भतभती पोल्छ । यतिसम्म कि दुख्ने क्षणहरु दुख्न छोड्छन् । त्यो खुसी र त्यो रोदनको पलहरु कविले ‘अर्को नयाँ कथा’ र ‘घाइते मुस्कान’मा क्रमशः कविता क्रममा पस्केका छन् ।
‘बुढो चियाबारी र सत्ता’, ‘रङ्गीन साँझ’, ‘म ढुङ्गा’, ‘घामको उपद्रो’, ‘शीतको प्रेमिल पीडा’, ‘साँझको विरासत’ शीर्षकको कविता प्राकृतिक छन् । वरपरको वातावरणलाई मेहे मानेर भावनालाई कुदाएर कवितामा अड्काइएको छ । ‘निर्वाचन’, ‘क्रान्तिको परिभाषा’, ‘चुनावपछिको मेरो नगर’, ‘झण्डा’, र ‘मौन समय’ शीर्षकका कविताहरु नीति बदल्नेसँग सम्बन्धित छन् ।
‘प्रेमको सिम्फोनी धुन’, ‘म र तिमी’, ‘हाम्रो सपना’, ‘मन चोर्ने मान्छे’, ‘प्रेमको लय’, ‘उनी बेनी नझरेपछि’ जस्ता कविता प्रेमिल छन् । ४३ वटा कविताको शीर्षकलाई मेल खाने हरफहरु छन् । देखेको, जानेकै भोगेकै दृश्यहरुलाई सरल ढंगले कवितामा खिपेका छन् । जसले कृतिलाई ओजनदार बनाएको छ । कृतिलाई सम्झिरहने भर्याङ बनाउनेछ । साहित्यको भण्डारलाई कृतिले मलजल गर्ने नै छ । श्यामलको शब्द पैँचो माग्छु, ‘अक्षर सिम्फोनी’ क्या वात् !’
सम्झिँदा मात्र होइन
विर्सिएको बेलामा पनि
सम्झिरहेको हुन्छु तिमीलाई नै
के तिमी पनि
यसरी नै सम्झिरहेका हुन्छ्यौं, मलाई ?
(‘सम्झना’ पृष्ठ ११६–११८)
कृतिः ‘अक्षर सिम्फोनी’
प्रकाशकः मञ्जरी पब्लिकेशन
आवरणः टाइम्स क्रियशन
सर्जक : विमल वैद्य